umshini wokushelela insimbi yokugaya ukudla okuhlanganisa amabele,ukolweni
Ngabe utshala irayisi?, ukolweni, ubhontshisi, isidlo noma amabele? noma usebhizinisini lezokulima okusanhlamvu? Uma ufuna umshini wokulima ubabhule, kungani ungakhethi isilondolozi sethu sokudla okusanhlamvu? Ngiyethembisa ukuthi uzothola inzuzo enkulu kumshini wokuhluza okusanhlamvu omningi.
Umshini wokubhula okusanhlamvu owenzelwa okuningi usetshenziselwa ukubhula kommbila, pearl millet, umunyu, ubhontshisi,irayisi,ukolweni ne-adzuki bean.I-Pearl millet isanhlamvu okusanhlamvu okunempilo okukhula kwezinye zezifunda ezithandwa yindlala e-Afrika, ukhiqiza isivuno esithembekile esomile, isimo sezulu esishisayo esinekhwalithi emile yenhlabathi. Yize i-pearl millet ingumthombo omkhulu wokudla kwabampofu basemakhaya, ukukhiqizwa komshini wokushelela okusanhlamvu okusebenza ngokuningi kanye namandla emakethe akhawulelwe izindlela ezingasebenzi kahle nezisebenza ngokuzikhandla zabasebenza kakhulu. I-Victor brand multifunction millet sheller yasungulwa ukusiza abalimi abancane ukuthi bandise izivuno zabo zokusanhlamvu okusanhlamvu ngenkathi banciphisa ukudonsa kwabo.. Umshini wedizili wenzila yedizili ungaphethwe ngokuhlanganyela ngamasibambisane, amakhaya ngamanye, noma ngamabhizinisi, abangakwazi ukucubungula okusanhlamvu kwabo kalula futhi bakusebenzisele ukusetshenziswa kwasendaweni, noma uthengise ezimakethe zasendaweni.
Lo mshini wokusanhlamvu wokusanhlamvu ukhiqizwa ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zokusanhlamvu, ukudweba ekusebenzeni kweminye imibando, lo mshini wokushelela okusanhlamvu okwenziwa ngemishini wamukela ukusebenza kwesigaba esisodwa sikagesi,Isakhiwo esinengqondo nesilula ,ukusebenza okuzinzile futhi okunokwethenjelwa ukulungiswa kulungele ukusetshenziswa, okungagcini nje ngokugcina ukusebenza kepha futhi kunciphisa amandla amakhulu .Kula inani lokulahleka okuncane nokubhula okuphezulu, isilinganiso sokuhlanza .Umshini wokugcina izidakamizwa ungaxazulula kahle izidingo zokubhula okusanhlamvu okuhlukahlukene futhi ungakhiqiza izinzuzo ezingcono zomnotho nezenhlalo zeningi labalimi nabamabhizinisi okukhiqiza.
Izici zomshini wokushelela okusanhlamvu okusebenzayo
1.Umshini wokudla okusanhlamvu owenzelwa imisebenzi eminingi usebenza kahle futhi ungabhula kahle irayisi nokolweni kakhulu. Umshini wokugaya iMillet unezici zesakhiwo esihlanganisiwe, ukwakheka okuhle nokusebenza okuthembekile. Kuboniswe ngesilinganiso sako esiphezulu sokukhiqiza, ukusebenza okuhle kokubhula nokulahlekelwa okusanhlamvu okumbalwa njll., umshini weSalghum sheller ungumsizi omuhle nabalimi. umshini we-multifunction sorghum sheller unebubanzi bohlelo lokusebenza, elula futhi iphephile, ukusebenza kahle kokukhiqiza, isilinganiso sokulimala okuphansi kanye nezinga lokulahleka okuphansi.
2.Umshini wokusebenzisela izinto ezinhlobonhlobo osebenzayo we-sorghum ikakhulukazi uhlanganiswa nezimoto,ama-racks, isikrini concave, isigubhu, ikhava, fan omkhulu, owesibili fan fan, isikrini sokudlidliza, ukuhlanza nokulungisa.Umshini wokubumba wamadizili unikwa amandla yi-3kw single-phase motor motor, injini yephethiloli noma injini yedizili .
3.isigaxa sotshwala umshini usebenzisa igebe phakathi kwamazinyo we-welding rod ne-concave plate, ngemuva kokuba imbewu yokusanhlamvu isuswe ngokujikeleza, ukukhipha, ukubamba, ukushaya,Lapho usebenza, umshini wokudla okusanhlamvu owenzelwa abaningi uzokondla impahla ebunjiwe kusigubhu sokubhula. kusetshenziswa ama-bubble omoya notshani obudonswa ngumshini womoya nesikrini sokudlidliza fan. Imbewu yokusanhlamvu notshani kwaqedela umsebenzi wokuhlukanisa kanye nokuhlunga kanye, futhi izinga lokususa lifinyelelwe 99%.
Umgomo wokusebenza womshini wokulungisa izinto eziningi
Umshini wokupholisa izinhloso eziningi uqukethe i-hopper yokudla, isigubhu, isikrini neshalofu.Ihlanganisa ukubhula, ukwehlukanisa, ukusikwa komhlanga wonke futhi kungasebenziselwa ukolweni, ibhali, irayisi, umunyu, amabele, ubhontshisi kanye ne-rapeseed.Uklamo okhethekile obhekise kokungenayo okuphezulu kukwenza kube lula ukubeka izinto ezingavuthiwe. Ngaphezu kwalokho,Kungcono ukukhetha isivuno 80% umswakama,okunganciphisa izinga lokuphuka.
Lapho umshini wokusebenzisa ishelufu osebenzayo usebenza, izitshalo zondliwa ngokuqhubekayo nangokulinganayo. Isilimo sihlukaniswa nesiqu ngokushayisana, extrusion, ukushayisana nokuqhaqhazela phakathi kwe-rack esgubhu kanye nesikrini.kusanhlamvu ngemuva kwehlukaniswe nesiqu, nesigaxa sishaywa ngumuntu osalungiswa. Okwamanje,izikhwebu ziphuma kwesinye isitolo.
Amapharamitha wezobuchwepheshe womshini wokusanhlamvu wokusanhlamvu owenziwayo
Imoto kagesi / Injini kaphethiloli / injini yedizili
Isilondolozi sokusanhlamvu semulticuntion wokubhulela amabele
Ukubhula okusanhlamvu okuhlukahlukene
Umshini wokushelela okusanhlamvu okuhlukahlukene